ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 44.2 Changzhou သို့
စံနစ်ကောင်းဆိုတာ.. လူပျင်းလူဖျင်းတွေကိုတောင် ဒရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်..။ စံနစ်မကောင်းလို့ကတော့ လူတော်လူမော်တွေတောင် လူရှော်ဖြစ်သွားရော..
"အခွင့်အလမ်းတွေသာ လုံလုံလောက်လောက် ရှိခဲ့ရင် .. ကိုယ့်နိုင်ငံက လူငယ်တွေလည်း..သူတို့လို မဖြစ်စရာ မရှိဘူးလို့ တွေးမိတယ်..။ စံနစ်ကောင်းဆိုတာ.. လူပျင်းလူဖျင်းတွေကိုတောင် ဒရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်..။ စံနစ်မကောင်းလို့ကတော့ လူတော်လူမော်တွေတောင် လူရှော်ဖြစ်သွားရော..။"
ပိုဆိုးတာက စနစ်ဖျင်း။ စနစ်ဖျင်းမှာ လူဖျင်း လူမြှောင် လူမိုက်တွေကို မွေးဖွားစေတယ်။ နေရာရစေတယ်။ လူတော် လူကောင်း လူလိမ္မာတွေကို ပျက်စီးစေတယ်။ မှေးမှိန်စေတယ်။
.......စံနစ်ကောင်းဆိုတာ.. လူပျင်းလူဖျင်းတွေကိုတောင် ဒရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်..။ စံနစ်မကောင်းလို့ကတော့ လူတော်လူမော်တွေတောင် လူရှော်ဖြစ်သွားရော.........
(I think so. Human beings usually try to adjust the environment around them.)
တရုတ်ပြည်တိုးတက်တာ ခုမှပါ ဆိုတဲ့ ပါမောက္ခကြီးကို ဘီစီ ၆ရာစုကနေ အေဒီ၁၆၀၀ အထိ တရုတ်ပြည် ကို မြင်တွေ့စေချင်တယ်..
ဒီပိုစ့် လေးကိုလည်းကြိုက်တယ်ဗျာ